4 Layliyo loogu talagalay Plattfot (Pes planus) | Jimicsi iyo jimicsi xoog
Bente wuxuu leeyahay,
Hi! Waxaan ahay gabadh 38 jir ah oo u malaynaysa inaan cagaha fidsan ahay / kor u kacay. Ma qabo xanuuno jidheed oo waaweyn wakhti xaadirkan, laakiin mararka qaarkood waxaan dareemayaa in dhabarka hoose uu daciif yahay, iyo xanuun marmar ah oo miskaha ah. Sidoo kale si sahlan loo ururiyo dareeraha lugaha, bowdada-jilibka- weylaha-anqawyada. Wuxuu tuhunsan yahay wareegga dhiigga oo liita. Wax kale oo aan ku dhibtooday ayaa ah helitaanka kabo u muuqda kuwo wanaagsan. Aad ayaan u gaabanahay (167cm), cabbirka 39/40 ee kabaha si gaar ah uma faani karo marka aad u muuqato in ay sidoo kale ka maqan yihiin anqawyada. Waxa laga yaabaa inay u ekaato doqonimo, laakiin waa dhib dhab ah, runtii. Miyay jirtaa in haddii aan sameeyo jimicsiyo iyo xoog / tababaro qaansada cagta, anqawyadu "toosin doonaan" oo anqawgu wuu sarreeyaa? Waxaan si joogto ah u tababaraa xoogga mana cuslana .. qiyaastii 58kg. Waxa kale oo aan leeyahay lugo u eg laba tuubbo oo dabacsan oo si toos ah kabahayga u gala, inkastoo xaqiiqda ah in aan firfircoonahay. Markaan eego muraayadda oo aan toosiyo cagta / qaansada booska aan u maleynayo inay tahay "buugga ka dib", waxaan arkaa in lugaha ay u muuqdaan kuwo caadi ah. Dareenka fidsan ee cagaha si xun ma u saameyn karaa murqaha kubka sinaba? Ma u malaynaysaa in murqaha qaarkood ay noqdaan kuwa "firfircoon", lugahana aan loo tababarin si ku filan? Waa maxay tillaabooyinka aan qaado? Iyadoo aan loo eegin in bannaanku aanu isbeddelayn, waxaan wax ka qaban doonaa dhibaatada cagaha-lalatada ah. Waxaa jiri doona socod badan oo kabaha caagga ah ee sagxadaha shubka ah sanadaha soo socda, sidaas darteed waxaan u furanahay dhammaan ka hortagga cudurrada.
Waxaan rajaynaynaa in aad raggu talo uun ka dhiiban karaan!
Waxa ugu horreeya ee aan ku bilaabi doono waa u -diritaanka dhakhtarka lafaha si loo qiimeeyo taam ahaanshaha keli ah. Kalid toosiye waxay u horseedi kartaa firfircoonida muruqa oo aad u sax ah - taas oo iyaduna horseedi karta muruqyada kubka “mar kale si fiican isku xira” sidoo kale. Dhakhtarkaaga Guud (GP) ama lafopractor ayaa kuu gudbin kara qiimeyntaas.
Haddii kale, waxaan u maleynayaa inaad isku dayday inta badan jimicsiyada iyo wixii la mid ah - sida qaar fiidiyowyadan.
4 Jimicsiyada Guriga ee Ka Hortagga Cudurka Crystal (Dawada Xanuunka Dhalashada) - Macaaneeye dabiici ah: Jid dhakhso leh oo miisaanka culus leh?